နှုတ်ဆက်ရွက်ကြွေ(၄) – Hsu Myat Moe
နှိုးစက်မြည်သံကိုကြားသည်နှင့် ကျင့်သားရနေတဲ့မျက်ဝန်းတွေက အလိုလျောက်ပဲပွင့်လာခဲ့သည်။ နောက်ကျမှသွားလို့ရသော်လည်း အခွင့်အရေးကိုအပြည့်အ၀မယူချင်သောစိတ်နဲ့အတူ အိပ်ရာမှထကာ ရေချိူးရန်ထလာလိုက်သည်။ ညနက်အောင်အထိ စာလုပ်ထားသောဖြူကတော့ အိပ်မောကျတုန်း ။ မနက်ဖြန်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ အတွေးက ခေါင်းထဲကိုမခေါ်ဘဲဝင်ဝင်လာသည်။ ဒီနေ့ဟာ သူမအတွက် အလုပ်ထဲမှာနောက်ဆုံးရက်ဖြစ်သလို မကြာခင်မှာလည်း နှစ်ရှည်လများနေလာခဲ့ဖူးတဲ့ ဒီအဆောင်ကိုချန်ထားခဲ့ပြီး ဦးငယ်နဲ့အတူ ဘ၀သစ်တစ်ခုကိုစတင်လျှောက်လှမ်းရတော့မည်။ ပြင်ဆင်ညှိနှိုင်းခဲ့သောအချိန်တွေဘယ်လောက်ရှိရှိ တကယ်တမ်းရင်ဆိုင်ရတော့မှာမို့ သူမစိတ်လှုပ်ရှားမိသည်။ ဘ၀ရဲ့လှိုင်းတွေက ခပ်ကြမ်းကြမ်းရိုက်ခတ်ဖူးလေတော့ ခိုင်မြဲလှပါတယ်ဆိုတဲ့ ကျောက်ဆောင်တောင် လေလာတိုင်းလှိုင်းများလားလို့တုန်လှုပ်စမြဲမဟုတ်လား…ရှေ့လျှောက်ရမယ့်လမ်းတွေကို ချောချောမောမောနဲ့လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါ့မလားဆိုတဲ့ သံသယတွေနဲ့အတူ စိုးရွံ့နေမိပြန်သည်။ “ကံဇာတာရယ် တစ်ခါတော့အလှည့်ပေးပါနော်” လို့သာသီချင်းလေးညည်းလိုက်ချင်ပါတော့သည်။
“ငါတော့ဘာပြောလို့ပြောရမှန်းတောင်မသိတော့ဘူး ဒါပေမယ့် ငါတို့တွေသတိရနေမှာပါဟာ..ပြီးတော့ နင့်နေရာမှာလုပ်မယ့်တစ်ယောက်လည်း ဘာတွေတလွဲလုပ်ဦးမလဲမသိဘူး”
တကယ်တမ်းလည်းခွဲခွာရမယ်ဆိုတော့ သံယောဇဉ်အဖွဲ့အနှောင်တွေက ခပ်တင်းတင်းလည်းချည်လို့..။ မသက်မာရဲ့ဝမ်းနည်းစကားတွေ၊ အလုပ်ထဲက သူငယ်ချင်းတွေရဲ့နှုတ်ဆက်စကားတွေကြားတော့ သူမစိတ်မခိုင်ချင်။
“သူဌေးကတော်ဖြစ်တော့မှ သွေးမကြီးသွားနဲ့နော်” လို့နောက်တဲ့သူကနောက်ကြသေးသည်။ သူမ မက်မောသည်မှာ သူဌေးကတော်ဆိုသောဂုဏ်ပုဒ်လည်းမဟုတ် ၊ ဘ၀၏ပြည့်စုံကြွယ်ဝခြင်းလည်းမဟုတ် ။ တကယ်တော့ သူမကျေးဇူးတရားရယ် ၊ မေတ္တာတရားရယ်ကိုသာမက်မောတတ်ခဲ့တာပါ ။ ယူတတ်မယ်ဆိုရင် လိုချင်သလောက်ရနိုင်တဲ့ဦးငယ်ဆီကစွန့်ကြဲခြင်းတွေ .. သူမမှာ အခုထိတစ်ကိုယ်ရည်စာအသုံးအဆောင်အချို့ကလွဲရင် ပိုင်ဆိုင်ပစ္စည်းဆိုလို့ ဘာဆိုဘာမှမရှိခဲ့ ။ လမ်းကြောင်းမှန်တစ်ခုကိုမယိုင်မလဲအောင်ပံ့ပိုးပေးတဲ့ ကျေးဇူးတရားနဲ့တင် သူမကျေနပ်ခဲ့သည် ။ ရှေ့လျှောက်ပြီးတော့လည်း သူမကို မကြည်ဖြူသောအသိုင်းအ၀ိုင်းထဲကို မည်သို့မည်ပုံဝင်ရောက်ရမည်မှန်း သူမမသိ ။ စေတနာကိုအရင်းပြုခဲ့တဲ့ခရီးတစ်ခုအတွက်ရောင်ပြန်သောစေတနာတွေရှိလာမှာပါဟုသာ ရင်နှင့်ရင်းပြီးယုံကြည်နေမိသည်။
မသက်မာပေးလိုက်သော ကျောက်စီပန်းချီကားကို ကုတင်ပေါ်ကိုအသာအယာတင်ပြီး အ၀တ်အစားလဲကာ အိပ်ရာပေါ်မှာပက်လက်ကလေးလှဲနေမိသည်။ ဖြူ့ကိုကြည့်လိုက်တော့ တကုပ်ကုပ်နဲ့အလုပ်ရှုပ်နေတာမို့ နှုတ်ဆက်စကားလေးဆိုပြီး ငြိမ်ငြိမ်သက်သက်လေးလှဲနေမိခြင်းပင် ။
“မသိဘူးလေ ညီမလေး ကျောင်းကလုပ်ခိုင်းတာလား”
“အို ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ ဖြူတို့ ကျောင်းမှာ ဒါမျိူး craft တွေမလုပ်ခိုင်းပါဘူး….. ဖြူက မမအတွက် hand made လက်ဆောင်လေးလုပ်နေတာလေ..ပြီးမှပြမယ်နော်..”
“မဟုတ်ဘူးလေ မမရယ်… ဖြူလေ မမကိုတကယ်ကျေးဇူးတင်တာသိလား….ဖြူ့အကိုကလည်းမမကိုကျေးဇူးတင်နေတာ.. မမကြောင့် ဖြူဘုရားမှန်မှန်ရှိခိုးဖြစ်တယ် ၊ မမချက်ကျွေးလို့ထမင်းဟင်း အချိန်မှန်စားဖြစ်တယ် ၊ မမကြောင့်အချစ်ဆိုတာရော ၊ ဘ၀ဆိုတာပါသိလာတယ်လေ….”
ထမင်းချက်ဖို့ပျင်းတဲ့ဖြူ့ကို ညဘက်ထမင်းမှန်မှန်စားဖြစ်အောင် သူမအမြဲတမ်းဟင်းတွေချန်ထားတတ်ခဲ့သည်။ အဆောင်သူချင်းမို့လို့ ကိုယ်ချင်းစာတာတကြောင်း ၊ သူမအတွက်လည်းဖြူ့တစ်ယောက်စာက အပန်းမကြီးတတ်တာမို့ အမြဲလိုလိုဟင်းတွေပိုချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။
“ဟုတ်တယ်မမရဲ့တကယ်ပြောတာ… ခုလေ..ဖြူစိတ်ပူတယ်သိလား ဖြူ့နောက်အခန်းဖော်က ဘယ်လိုနေမလဲမသိဘူး”
“ကိုယ့်ဘက်ကစိတ်ရင်းအတိုင်းနဲ့သာဆက်ဆံရင် အဆင်ပြေပါတယ် ညီမလေးရယ်..မိဘအိမ်မှမဟုတ်တာ အနည်းအကျဉ်းတော့ သည်းခံသင့်တာသည်းခံရမှာပေါ့လေ…”
“ဒါနဲ့ညီမလေးရယ်.. ဒီညတို့နှစ်ယောက်လက်ဖက်သုတ်စားရအောင်..မမကိုဆိုင်က လက်ဆောင်တွေပေးလိုက်ကြတယ်လေ….”
ုဖြူက လက်ဖက်သုတ်ကြိုက်တတ်တာမို့ ငြင်းတောင်မငြင်းနိုင် ။ တစ်ခါတည်းကိုစားမယ်ဟုတန်းပြောလိုက်သည်။ ဘာပဲပြောပြော ဒီလိုညတွေဟာ နောက်တစ်ချိန်မှာ ရနိုင်ခဲတာမို့ ရင်ဘတ်တူချင်းဝေမျှဖို့ သူမရော ဖြူပါ အဆင်သင့်ဖြစ်နေခဲ့သည် ။
လက်ဖက်ပန်းကန်ကို သူမရှေ့မှာချရင်းဖြူကဆိုလိုက်သည်။ ပါးပါးလှီးထားသောဂေါ်ဖီထုတ် ၊ ခရမ်းချဉ်သီး ၊ ငရုတ်သီး ၊ ပဲစုံပါသည့်အပြင်နံနံပင်လေးပါလှီးထည့်ထားတာမို့ ဖြူ့လက်ဖက်သုတ်လေးက စားချင်စဖွယ်..။
“ရတယ် ညီမလေး… အဆင်ပြေတယ်..ရေနွေးကြမ်းသောက်ဦးမလား”
“နေ..နေ မမ ဖြူလုပ်ပေးမယ်”
ဖြူက ရေနွေးကြမ်းအပြင် ကြက်သွန်ဖြူတွေပါယူလာတာမို့ သူမတိုိ့လက်ဖက်သုတ်ဝိုင်းက ပိုပြီးမြိုင်ဆိုင်သွားသည်။
ဖြူ့လက်ရာလက်ဖက်သုတ်လေးက ဆိမ့်ဆိမ့်လေးနဲ့စားလို့ကောင်းလှပါသည်။ နံနံပင်လေးပါထည့်ထားတာမို့အရသာကတမျိူးလေး ။ အသီးအရွက်အစုံအလင်လည်းပါတာမို့ စားလို့မြိန်လိုက်သည့်ဖြစ်ခြင်း။
“ဟင့် ဖြူက ပိုလွမ်းရမှာပါ… မမက နယ်ရောက်သွားရင် ဦးငယ်နဲ့ပျော်နေမှာ… ဖြူ့မှာသာ တစ်ယောက်တည်း…ပြီးတော့ ထွက်သွားသူနဲ့ ကျန်ရစ်သူမှာ ကျန်ရစ်သူက ပိုလွမ်းရတယ်တဲ့….”
“ထွက်သွားသူကလည်း နှုတ်ဆက်ချန်ခဲ့ရတာ ဘယ်လောက်ခက်ခဲမလဲ ညီမရယ်…”
သူမတိုးတိုးတိတ်တိတ်ပြောလိုက်တော့ ဖြူတစ်ယောက်နှုတ်ဆိတ်လို့…။ မနက်မိုးမလင်းခင်ကနေ လှုပ်ရှားတက်ကြွနေခဲ့သောသူမတို့ပတ်ဝန်းကျင်ဟာ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လို့ ။ ပြာလဲ့ကြည်စင်သောကောင်းကင်ဟာ လမရှိပေမယ့် ကြယ်စင်အလင်းတွေနဲ့ပဏာရနေသည်။ ညကနက်လာသလို ခံစားချက်တွေနက်လာခဲ့သည်။ ခုနစ်စဉ်ကြယ်ဟာ အမြီးလေးကိုကောက်လို့…..။
ဖြူပြောတဲ့ဟိုတစ်ယောက်ဆိုတာ ကောင်းဇင်ကိုရည်ရွယ်မှန်း နာမည်ထုတ်မပြောလဲ သူမသိနေခဲ့သည်။ ပြီးဆုံးခဲ့သောအကြောင်းအရာတွေအသစ်ဖြစ်ချင်စိတ်သူမမှာမရှိ ။ ဒါပေမယ့်…..
“စိတ်က မရှိပေမယ့် နှလုံးသားကရော……”
နှလုံးသားရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုသူမလျစ်လျူရှုနေခဲ့တာကြာပြီ ။ တချိန်တခါတုန်းက ဇိုးခနဲဇတ်ခနဲခုန်တတ်ခဲ့တဲ့ နှလုံးသားကြောင်းတွေ၊ အမည်မသိသောခံစားချက်တွေကိုမွေးဖွားစေတဲ့အပြုံးနုနုတွေ ၊ သွားတက်ကလေးတွေဖွေးခနဲပေါ်အောင်ရယ်တတ်တဲ့ ကြည်လင်သောအပြုံးတွေရယ်…….တကယ်တော့ ဒိုင်ယာရီစာမျက်နှာဟာ မျက်ရည်တွေကိုအိုင်ထွန်းစေတယ်ဆိုရင် သူမပြန်မလှန်တာပဲအကောင်းဆုံးမလား ။ ဟင့်အင်း..သူမအပြုံးနုနုလေးတွေကိုတမ်းတနေတုန်းပဲ ။ အေးမြသောမျက်ဝန်းအစုံကိုမြင်ယောင်နေတုန်းပဲ ။
“ကောင်းဇင်ကို တစ်နေ့ပြန်လာနိုးနိုးနဲ့ မမမျှော်လင့်နေခဲ့ဖူးတယ်…အပြစ်မမြင်လောက်အောင်အထိ နားလည်နေခဲ့ဖူးတယ်..သူ့သတင်းတွေကိုနားစွင့်ပြီးသူ့ကိုစောင့်နေခဲ့ဖူးတယ် ဒါပေမယ့် သူပြန်မလာခဲ့ဘူး ”
“သူ လုံးဝအဆက်သွယ်မလုပ်တာလား မမ”
“ဟုတ်တယ် ညီမလေး…တစ်နေ့ပြန်လာနိုးနဲ့မျှော်လင့်တဲ့သူသာ မောတယ်လေ..နောက်ဆုံးတော့ နာကျည်းစိတ်ကအနိုင်ရသွားခဲ့တယ် ပြန်မလာတဲ့သူကိုမမခွင့်မလွှတ်တော့ဘူး…. ”
“သူ့ဘက်က ဘယ်လိုအခက်ခဲတွေရှိလဲ မမသိလို့လားဟင်…သူ့မှာလည်းအခက်ခဲတွေရှိနိုင်တာပေါ့”
“သူ့မှာ ဘာမှပြသနာရှိမနေခဲ့ဘူး ညီမလေး သူ့အတ္တတွေကပဲ သူ့ကိုအနိုင်ယူသွားတာ… တကယ်လို့သူသာမမကိုတကယ်ချစ်ရင် ညှိနှိုင်းယူရမယ်လေ…တကယ်တမ်းမြတ်နိုးရင် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်လာရမယ်လေ..”
“ခု သူပြန်လာတယ်လေ မမ”
“သူ မမကိုချစ်လို့ပြန်လာတယ်ထင်လား……သူ့အတ္တတွေအတွက်ပြန်လာတာ..သူ့ရင်ဘတ်ထဲက အတ္တတွေအတွက်ပြန်လာတာ”
“သူ့ရင်ဘတ်ထဲမှာ သူမပေးထားတဲ့ မမဆိုတဲ့နေရာသေးသေးလေးတစ်ခုရှိနေသေးတယ်..အဲဒီနေရာကိုဆုံးရှုံးရမှာစိုးတယ်ဆိုတဲ့ အတ္တတစ်ခုကလည်းရှိနေသေးတော့ ဒွိဟဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့အတူ မမကိုပြန်ဆက်သွယ်တာ…တကယ်လို့မမသာ ဦးငယ်နဲ့လက်မထပ်ဖြစ်ဘူးဆိုရင် သူပြန်လာချင်မှပြန်လာမှာ..ရှင်းရှင်းပြောရရင် သူမလိုချင်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကို သူများလက်ထဲကိုထည့်ရဖို့ စိုးရွံ့နေတဲ့ သူ့အတ္တအတွက်ပြန်လာတာ….”
“ဒါကြောင့် မမပြောတယ်လေ…ကောင်းဇင်စိတ်ကိုမမက ကာယကံရှင်ထက်တောင်ပိုသိနေတယ်ဆိုတာ.. ကောင်းဇင်က သိပ်အတ္တကြီးတယ် ညီမလေး”
“ဒါပေမယ့် မမဆိုတဲ့အတ္တနေရာလေးသူ့ရင်ထဲမှာရှိနေသေးတယ်…ပြီးတော့ မမကလည်း ဖြူ့ကိုစိတ်တော့မဆိုးပါနဲ့ ကျေးဇူးတရားကြောင့်သာ ဦးငယ်ကိုယူရတာမလား…..ဦးငယ်က မမမယူချင်ဘူးဆိုရင် ဘယ်အတင်းလုပ်ပါ့မလဲ.. ပြန်ညှိကြည့်ပါဦးလား ငယ်ချစ်ဆိုတဲ့သံယောဇဉ်ဟာ တော်တော်လေးကိုလေးနက်မှန်းဖြူသိပါတယ်..”
ပြတ်သားခိုင်မာသောဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဘယ်လိုမှမပြင်နိုင်မှန်းသိသွားသောဖြူကလည်းသူမအပေါ်မှာတိုက်တွန်းစကားထပ်မဆိုတော့ပေ ။
ချစ်သူတိုင်းတာပေါင်းရစတမ်းဆိုရင် “ချစ်တိုင်းလည်းမညား” ဆိုတဲ့စကားပုံတွေဘယ်ပေါ်လာမလဲညီမလေးရယ် ဆိုတဲ့စကားကိုတော့ သူမထုတ်မပြောဖြစ်ခဲ့ ။ ချစ်တိုင်းလည်းမညားတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေဟာ သူမပတ်ဝန်းကျင်မှာ ပေါများလွန်းလို့ အရေထူနေပြီဖြစ်ကြောင်း ဆယ်ကျော်သက်မလေးမသိနိုင်ရှာ။
အသဲပုံဖော်ထားသော coffee lattae ခွက်ကလေးကို ဇွန်းနဲ့မွှေလိုက်ပြီး ခုချိန်ထိပေါ်မလာသေးသော ကောင်းဇင်ကိုထိုင်စောင့်နေမိသည်။ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအဖြစ်နဲ့နောက်ဆုံးတွေ့ခွင့်ပေးဖို့ ကောင်းဇင်တောင်းဆိုလို့ စိမ်းလန်းစိုပြည်က Zypher ကို သူမရောက်နေခြင်းပင် ။ ထုံးစံအတိုင်းချိန်းထားတဲ့အချိန်ထက် နောက်ကျမှရောက်မည်ဖြစ်သောကောင်းဇင်အကြောင်းကိုသိသိကြီးနဲ့ စောထွက်လာမိတဲ့ကိုယ့်ကိုကိုယ်အပြစ်တင်ရမလား ။ သူမဒီကိုရောက်နေတာ တစ်နာရီနီးပါးခန့်ရှိခဲ့ပြီး ။ကောင်းဇင်ကတော့ ပေါ်မလာသေး ။ စောင့်စားခဲ့ဖူးသောနေ့ရက်တွေအကြောင်းကို သတိရသလိုလိုဖြစ်လာပေမယ့်ခေါင်းထဲကနေထုတ်ပစ်လိုက်သည်။ အဟောင်းတွေအသစ်မဖြစ်သင့်တော့ဘူးလေ။
menu ကိုကြည့်ပြီး ကောင်းဇင်က စားစရာသောက်စရာတွေကိုမှာနေရင်း သူမကိုလှမ်းမေးလိုက်သည်။
“အင်း အဆင်ပြေပါတယ်လေ..ဟိုက ငါ့သူဌေးက ငါ့ကိုအားကိုးတယ်လေ..ခု ဒီမှာရုံးခွဲဖွင့်ဖို့ကိစ္စအတွက်နဲ့ ငါ့ကိုလွှတ်လိုက်တာလေ.. အလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ပေါ့ဟာ..”
“ငါ အဲဒီမှာ ကျောင်းဆက်တက်ဖြစ်တယ် ငါ့ဦးလေးထောက်ပံ့လို့ပေါ့ဟာ…မဟုတ်ရင်မလွယ်ဘူး”
ထောက်ပံ့သည်ဆိုသောစကားတစ်ခွန်းနဲ့အတူ စကားဝိုင်းလေးက ရုတ်တရက်ခြောက်ကပ်သွားသည်။ ဒီလူနှစ်ယောက်ကြားမှာ ထောက်ပံ့ခြင်းဟူသောစကားနဲ့ပက်သက်လို့ပြောစရာ ၊ ဖြေရှင်းစရာတွေအများကြီးရှိနေပေမယ့် မသိချင်ယောင်မျက်နှာလွှဲဖြစ်လိုက်သည်။
“အင်း နင်အဆင်ပြေတာဝမ်းသာပါတယ်…. ဒါနဲ့ လာမယ့် သောကြာနေ့မှာ ဦးငယ်နဲ့ငါလက်မှတ်ထိုးမှာ ပွဲတွေဘာတွေတော့မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူး ဆွမ်းတော့ကပ်မှာ”
“နင်ငါ့ကိုမငဲ့တော့ဘူးလား……. နင်ပြောတော့ ငါနားလည်လာမယ့်နေ့ကိုစောင့်နေမယ်ဆို…ငါအခုနားလည်နေပြီလေ”
ကောင်းဇင်နှင့်နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့နေ့က သူမထိုသို့ပြောခဲ့ဖူးသည် ။ ဦးငယ်နဲ့မပက်သက်ကြောင်းအာပေါက်မတတ်ရှင်းပြခဲ့ဖူးသည် ။ နားလည်ပေမယ့် မျက်ရည်စိုရွှဲပြီး ငိုကြီးချက်မတောင်းဆိုခဲ့ဖူးသည်။ အတိတ်တစ်နေရာမှာ သူမအပေါ်မှာ ကောင်းဇင်တစ်ယောက် ဘယ်လောက်ထိမာကြောပြတ်သားနိုင်ခဲ့သလဲဆိုတာသူမသာအသိဆုံး ။ သွေးစိမ်းရှင်ရှင်ထွက်ကျမတတ်နာကျင်ခဲ့ရသော ၊ နာလန်မထူနိုင်လောက်အောင်ပြိုလဲခဲ့ရသော ၊ ချစ်ခြင်းကြောင့်သေဆုံးခဲ့ရသော သူမရင်ဘတ်ကြီးအသိဆုံး။
“နင် နားလည်တာနောက်ကျသွားပြီ… ငါဆုံးဖြတ်ပြီးသွားပြီ”
“ကောင်းဇင်..နင်ငါ့ကိုအခုမှလာပြီး ရက်စက်နိုင်ပြီတွေလာလုပ်မနေနဲ့ နင်ယောက်ျားမဟုတ်ဘူးလား….နင်လုပ်တာနင်ခံပေါ့…..နင်နဲ့ငါနဲ့ကြားမှာဘာမှရှိမနေတော့ဘူး…ငါနင့်ကိုမဖြတ်ခဲ့ဘူး နင်ပဲငါ့ကိုဖြတ်ခဲ့တာ..”
“ဟုတ်တယ် ငါနင့်အပေါ်မတရားခဲ့ဘူး..ငါ့ဘက်ကလည်းစဉ်းစားကြည့်ဦး…ငါ့မှာယောက်ျားမာနရှိတယ်..ငါ့ချစ်သူဟာ တခြားလူတစ်ယောက်ရဲ့အထောက်အပံ့ကိုယူနေရတယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်က ငါ့မာနကိုဘယ်လောက်ထိခိုက်သလဲ နင်သိလား”
“နင် တော်တော်လေးလွဲနေပြီကောင်းဇင် ငါဟာ ငါ့ခန္စာကိုယ်ကို ရင်းပြီးအထောက်အပံ့ယူနေတာမဟုတ်ဘူး… ငါ့အဖေရဲ့ကျေးဇူးတွေနဲ့ဦးငယ်က ထောက်ပံ့နေတာ.. ငါ ကျောင်းပြီးလို့ညပိုင်းတွေမှာ ဆိုင်မှာဝင်လုပ်ရတာ နင်မသိဘူး
ငါကျေးဇူကြွေးတွေအပေါ်မှာ ဘယ်လောက်တာဝန်ကျေအောင်နေရလဲ နင်မသိဘူး….ငါ့ရင်ထဲကအပူတွေသောကတွေကိုနင်မသိဘူး….နင်က ငါ့ကိုအပူတွေပဲပေးတယ်..နင်ငါ့ကို ဦးငယ်နဲ့မကင်းဘူးလို့လဲစွပ်စွဲသေးတယ်…ငါ့ဘ၀ ငါ့ဖြူစင်မှုတွေကိုငါအသိဆုံး……နင့်ကိုငါအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိစောင့်နေခဲ့တယ်..နင်ဆက်သွယ်လာနိုးနိုးနဲ့ငါစောင့်နေရင်း နင်သိလား အဲဒါတွေကို..”
“ငါ့ကိုစောင့်ရင် နင်ဘာလို့အခု ဟိုလူနဲ့ယူတော့မှာလဲ..”
“ပြန်မလာတော့တဲ့နင့်ကို ငါတစ်သက်လုံးထိုင်စောင့်ရမှာလား…..နင်ငါ့ဆီကို စာတစ်ကြောင်းပို့ပြီးဆက်သွယ်ခဲ့ဖူးလား ငါ့ဘ၀အတွက်အသင့်လျော်ဆုံးကိုငါရွေးချယ်တာ…ငါမှားလား….နင်ဒီဇတ်လမ်းကိုရေးခဲ့တာ..နင်ဘာသာနင်ပဲပြီးအောင်ကလိုက်တော့ ဒီအချိန်ကျမှငါ့ကိုလာအပြစ်တင်နေနဲ့ အားလုံးလွန်ကုန်ပြီ…”
ရင်ဘတ်တစ်ခုလုံးပွင့်ထွက်သွားမတတ်ခံစားခဲ့ရသမျှကိုသူမ အိတ်သွန်ဖာမှောက်ပြောချလိုက်သည်။ နှလုံးသားအနက်ရှိုင်းဆုံးတစ်နေရာထိစိုက်ဝင်ခဲ့ဖူးသော ဆူးတစ်ချောင်းကို ဆွဲနှုတ်ခံလိုက်ရသလို တဖျတ်ဖျတ်လူးနာကျင်လို့..။
“ ငါတစ်ခုပဲပြောချင်တယ်.. နင်နဲ့ငါဟာ ဘယ်တော့မှထပ်မပက်သက်သင့်တဲ့သူတွေပဲ..နင့်ရင်ထဲမှာရှိတဲ့အတ္တတွေထဲကနေ နင့်ကိုယ်နင်ပဲကြိုးစားပြီး ရုန်းထွက်လိုက်ပါတော့ ကောင်းဇင်….”
ထုံအမ်းနေသောခံစားချက်ကိုယ်စီနဲ့ သူမကော်ဖီခွက်ဟာလည်းအရာမယွင်း ၊ ကောင်းဇင်မှာထားသော မြီးရှည်ဟာလည်းအရာမယွင်း ။
၀န်ခံခြင်းလား ချည်နှောင်ခြင်းလားမသိတဲ့ စကားတစ်ခွန်းကိုကောင်းဇင်ပြောလိုက်သည်။ သူမအလှပဆုံးအပြုံးတစ်ပွင့်နဲ့ပြုံးပြရင်း
“ဟင့်အင်း…နင့်ကိုငါခွင့်လွှတ်တယ်….အမုန်းတရားတွေနဲ့နာကျည်းခြင်းမျိူးနဲ့တောင်မှ နင့်ကိုသတိမရချင်တော့ဘူး…ငါသွားတော့မယ် သူငယ်ချင်း….”
အသင့်စောင့်နေသောဦးငယ်ကားပေါ်သို့တက်လာကာ ကောင်းဇင်ကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်လိုက်သည်။ ဇာတ်လမ်းအစက ခမ်းနားသလောက် ဇာတ်လမ်းအဆုံးကတော့ရိုးစင်လှသည် ။အပြုံးနဲ့တစ်ယောက်နဲ့ရှေ့ဆက်သွားသလို အရှုံးနဲ့တစ်ယောက်ကကျန်ရစ်ခဲ့သည် ။ ထာဝရနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ် ကောင်းဇင် ။
အမေချန်ခဲ့သောအရိပ်ဆိုးတချို့ကျန်ရှိခဲ့ပေမယ့် ဇာတိမြို့ကလေးက သူမကိုနွေးထွေးလုံခြုံစွာကြိုဆိုနေဆဲ ။ သူမသာမလုံသောစိတ်နဲ့အတူ စွန့်ပစ်ခဲ့ပေမယ့် ဇာတိမြို့လေးက အရင်အတိုင်း ။ ဖေဖေ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့ဆွေမျိူးနီးစပ်တွေရဲ့ကူညီမှု ၊ ဦးငယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေရဲ့အားပေးမှုကြောင့်သူတို့မိသားစုလုပ်ကိုင်ဖူးတဲ့ ဆန်ပွဲရုံအလုပ်ကို ပြန်လည်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ သူငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းတွေ ၊ ဆွေမျိူးသားချင်းတွေက သူမအတွက်ဝမ်းသာပေးကြသည်။ တည်ငြိမ်အေးချမ်းသောအိမ်ရှင်မအဖြစ်နဲ့ ဦးငယ်အနားမှာနေရင်းနဲ့ သူမတတ်နိုင်သလောက်ပံ့ပိုးကူညီပေးခဲ့သည် ။အိမ်ထောင်သက်ရလာတာနဲ့အမျှ ဦးငယ်၏စေတနာ မေတ္တာအရိပ်မှာ သူမဘ၀လုံခြုံအေးချမ်းလှသည်။ ရောဂါသည်မို့ ကိုယ်ကပဲပြုစုရမလားမှတ်တယ် ဦးငယ်တစ်ယောက်ဒေါင်ဒေါင်မြည်ကျန်းမာရုံသာမက မိသားစုစီပွားရေးကလည်း ဒီရေအလားတရိပ်ရိပ်တိုးလို့ ။ ပွဲရုံတစ်ရုံကနေ နှစ်ရုံသုံးရုံထိတိုးလာနိုင်ရုံမက လာခြင်းကောင်းသော သမီးလေးတစ်ယောက်ပါရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ တချိန်ကရှိခဲ့ဖူးသော ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တချို့ကလည်း အကြောင်းတိုက်ဆိုင်လျင်တောင်မှ သူမနဲ့မဆိုင်သလို တစိမ်းသက်သက်။ ပြုခဲ့ဖူးသော ဖြစ်ခဲ့ဖူးသောဝဋ်ကြွေးတချို့ဟာ သူမအတွက်ထိုနေရာမှာပင်အဆုံးသတ်သွားခဲ့ပုံရပါသည်။
ရင်မှဖြစ်သောသမီးလေးနဲ့ ဦးငယ်သာရှိတော့တဲ့ သူမရဲ့ကမ္ဘာမှာ သူမကိုစွန့်ပစ်ခဲ့သောအမေဆိုတာလည်းမရှိတော့သလို သူမကိုနာကျင်စေခဲ့သော ကောင်းဇင်ဆိုတာလည်းမရှိတော့ ။ ဒီအဖေ ၊ ဒီသမီးအတွက်ပဲ သူမဘ၀ကဖြစ်တည်လို့ ။
ခုတလောရာသီဥတုကမသာယာ။ မိုးတစီစီရွာနေတာ ဒီနေ့နဲ့ဆိုလျင် ငါးရက်တိတိရှိခဲ့ပြီ ။ ကောင်းကင်တစ်ခုလုံးမဲမှောင်ပြီး လေတ၀ူးဝူးတိုက်နေတာမို့ အသဲငယ်သောသမီးငယ်လေးကလည်း သူမကိုမျက်စိအောက်ကအပျောက်မခံ ။ ဦးငယ်တစ်ယောက်ကလည်း လေကြီးလို့ပွဲရုံကိုမသွားပါနဲ့လို့တားသည့်ကြားကနေ မဖြစ်ဖြစ်အောင်ထွက်သွားသည်။ သမီးငယ်လေးကိုခါးထစ်ခွင်ချီရင်း ပြတင်းပေါက်ကနေ ဦးငယ်လာရာလမ်းကိုမျှော်နေမိသည် ။ သူမတို့ဒေသက ပုံမှန်အားဖြင့်မိုးသိပ်မကြီးတတ်ပေမယ့် ခုလိုမျိူးလေရော မိုးရောပါလာပြီဆိုရင်ဖြင့် မြစ်ကမ်းဘေးမှာတည်ရှိနေတဲ့ဒေသမို့ အန္တရာယ်များတတ်ပါသည်။ ရေကြီးခြင်း ၊ ကမ်းပြိုခြင်းတွေကြောင့် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဆုံးရှုံးရတဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေမနည်းမနော ။ မြစ်ကမ်းဘေးမှာနေကြတဲ့မိသားစုတွေအဆင်ပြေကြပါစေဆိုပြီး သူမတိတ်တိတ်ကလေးဆုတောင်းနေမိသည်။ မိုးကလည်းသည်းသထက်သည်းလာသည်မို့ အခန်းထဲဝင်ကာ မအိပ်ချင်ဘဲဂျီကျနေသော ဖအေတူသမီးလေး မြတ်နိုးမောင် ကိုချော့သိပ်နေလိုက်သည် ။ သမီးလေးဟာ ရုပ်သာမက ခေါင်းမာသည့်နေရာမှာရော ၊ စကားတတ်သည့်နေရမှာပါမှာ ဦးငယ်နဲ့တော်တော်လေးကိုတူသည် ။ ရာသီဥတုက တစ်စထက်တစ်စဆိုးလွန်းလာတာမို့ ခုထိပြန်မလာသေးသောဦးငယ်ကိုသူမစိတ်ပူလှသည်။ လူခွဲတွေ ၊ မန်နေဂျာတွေရှိနေပေမယ့် ဦးငယ်က ပွဲရုံကိုစိတ်မချ ၊ မိုးယိုနေလျင် ဆန်တွေစိုကုန်မှာစိုးလို့ ကိုယ်တိုင်ပဲထွက်သွားရှာသည်။
ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး မိုးသံလေသံဖြင့်ဝုန်းဒိုင်းကြဲနေသည်။ သစ်ပင်ကျိူးကျသံတွေကြားသဖြင့် အိပ်နေသောသမီးလေးကို စောင်ခြုံပေးကာအပြင်ကိုထွက်ကြည့်လိုက်တော့ အိမ်ရှေ့က နှစ်ချို့သရက်ပင်ကြီးအမြစ်ကနေကျွတ်ထွက်နေသည်။ ဒီလောက်ဆိုးရွားသည့်ရာသီဥတုမှာတောင်အိမ်ပြန်မလာသေးသောဦးငယ်ကို သူမတော်တော်လေးစိတ်တိုကာ တယ်လီဖုန်းကိုကောက်ကိုင်ပြီးဖုန်းဆက်လိုက်သည်။
ဖုန်းခေါ်နေပေမယ့် ဦးငယ်က မကိုင် ။ သူမအခါခါခေါ်နေမိသည်။ မြစ်နဲ့နီးသောပွဲရုံမှာ ဦးငယ်တစ်ယောက်ဘာဖြစ်လို့ဖြစ်မှန်းမသိ ။ ဦးငယ်ရဲ့မန်နေဂျာကိုဖုန်းခေါ်တော့လည်းမကိုင်ပြန် ။ သူမစိတ်ပူခြင်းဒီဂရီတော်တော်လေးမြင့်သောအချိန်ကျမှ ဖုန်းကမြည်လာသည်။
“ဦးငယ်ဘယ်ရောက်နေတာလဲ..ဒီမှာစိတ်ပူလို့သေတော့ မယ်… အိမ်ရှေ့ကသရက်ပင်လည်းအမြစ်ကနေကျွတ်သွားပြီ… ပွဲရုံဘာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ် လူကိုယ်တိုင်အရောက်လာခဲ့ပါ…”
“ဖြေးဖြေးပြောပါ မိန်းမရယ်..အခု ကိုယ်တို့ပြန်လာနေပြီ..ကိုအောင်ကျော်ရော ကိုယ်ပါပြန်လာတာ.. မိုးတွေကြီးနေလို့ဖုန်းသံမကြားလို့မကိုင်တာ..”
“အင်းပါ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အမြန်ဆုံးပြန်လာပါ…. ဒီလောက်ရာသီဥတုမကောင်းရတဲ့ကြားထဲ လောဘဇောတယ်တက်တာပဲနော် ဦးငယ်…”
စိတ်တိုတိုဖြင့်ဆူနေသော သူမကို ဦးငယ်က တဟားဟားရယ်ရင်းနဲ့ စိတ်မပူဖို့ပြောကာဖုန်းချသွားသည် ။ ဘာပဲပြောပြော အသံလေးကြားလိုက်ရသဖြင့်သူမစိတ်ချမ်းသာရပါသည်။ မိုးတွေလေတွေကြီးရတဲ့အထဲ ဖုန်းကခေါ်လို့မရတော့ ဘယ်လောက်စိတ်ပူရလဲ သူမကိုယ်သူမပဲသိပါသည် ။
မိုးမိလို့တစ်ကိုယ်လုံးရွဲရွဲစိုကာ ဦးငယ်နဲ့ မန်နေဂျာကိုအောင်ကျော်အိမ်ပြန်ရောက်လာကြသည်။ သူမကတော့အချိန်ကြာလို့ဗျစ်တောက်ဗျစ်တောက်ပြောမိတော့ ဦးငယ်က တဟားဟားနဲ့သဘောကျလို့ ။
သူတို့ဆရာသမားနှစ်ယောက်ကအမြဲတမ်းခပ်အေးအေးပင် ၊ အပေးအယူမျှလွန်းလို့ အခုအချိန်ထိအဆင်တပြေရှိနေကြခြင်းဖြစ်သည် ။ ဦးငယ်ရဲ့အလုပ်အပေါ်မှာစေ့စပ်တိကျတဲ့ဒဏ်ကိုခံနိုင်တဲ့သူခဲယဉ်းပါသည်။ မန်နေဂျာတွေခေါ်ခန့်သည် တစ်လပင်မခံထွက်ကုန်ကြတာ ကိုအောင်ကျော်နဲ့ကျမှ အဆင်ပြေခြင်းဖြစ်သည်။
“ကိုအောင်ကျော်လည်း အိမ်မှာပဲအိပ်လိုက်တော့..ဒီမိုးနဲ့တော့ အိမ်ပြန်မနေနဲ့တော့..”
အပူအပင်မရှိသောလူပျိုကြီးကိုအောင်ကျော်ကတော့အိမ်မှာအိပ်ဆိုတော့ အသာတကြည်လက်ခံသည်ပင် ။ ဦးငယ်နှင့်ကိုအောင်ကျော်ကို စားဖို့သောက်ဖို့လုပ်ပေးပြီး အပေါ်ထပ်ကိုတက်လာကာ သမီးလေးကိုလာကြည့်တော့ သမီးလေးကအိပ်မောကျတုန်း ။ သမီးလေးဘေးမှာခဏလှဲလိုက်ရင်းနဲ့သူမမှေးခနဲအိပ်ပျော်သွားပါတော့သည် ။
“၀ုန်း” “ဒုန်း ” ဆိုသောအသံနှင့်အတူ အားခနဲအော်လိုက်သံကိုကြားသဖြင့်သူမလန့်နိုးလာခဲ့သည်။ လေတဖြူးဖြူးတိုက်နေသဖြင့်ဝတ်ထားသော ဆွယ်တာအထူကိုခပ်တင်းတင်းလေးစိကာ သမီးလေးကိုအသာလေးဖက်ရင်း သူမလှမ်းအော်လိုက်သည်။
ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကလဲ ပိန်းပိတ်မှောင်မည်းကာ မိုးခြိမ်းသံတွေအကျယ်ကြီးကြားလိုက် လျှပ်စီးတွေဖြန်းခနဲလက်လိုက်နဲ့ မိုးကြိုးပစ်သံတွေကိုပါတပြိုင်နက်တည်းကြားလိုက်ရသည် ။
အော်သံနဲ့အတူ ဦးငယ်နဲ့ ကိုအောင်ကျော်တို့အိမ်ပေါ်ကိုတဒုန်းဒုန်းပြေးတက်လာကြသည်။ သူမလည်းကြောက်လန့်စိတ်နဲ့ ဘာလုပ်လို့လုပ်ရမှန်းမသိ ။ သမီးလေးကိုသာဖက်ထားရင်း အိပ်ရာပေါ်မှာတုန်တုန်ယင်ယင်ကြီးထိုင်နေမိသည် ။
ဓာတ်မီးအရောင်နဲ့အတူ ဦးငယ်နဲ့ကိုအောင်ကျော်တို့သူမရှိရာကိုရောက်လာကြသည် ။ ခုမှနိုးလာသောသမီးလေးက မှောင်မဲနေသဖြင့်ကြောက်လန့်တကြားငိုလိုက်တော့ ကိုအောင်ကျော်က သမီးလေးကိုပွေ့ယူလိုက်ကာ ဓတ်မီးယူပြီး အပေါ်ထပ်ဝရန်တာဘက်ကိုထွက်သွားလိုက်သည် ။ ဦးငယ်က ဘီရိုထဲက သူမရဲ့ရတနာထုတ်လေးကိုယူပြီး သူမလက်ကိုတင်းတင်းဆွဲပြီး အိမ်ရှေ့ကိုထွက်အလာ…….
၀ုန်းဒိုင်းကြဲနေသော မိုးသံ လေသံ လှိုင်းသံ အပင်ကျိူးကျသံ အဆောက်အဦးတွေ ပြိုလဲသံနဲ့အတူ ကိုအောင်ကျော်ရဲ့ ရင်ကွဲလုမတတ်အော်သံကြီးကိုကြားလိုက်ရသည်။
4 thoughts on “နှုတ်ဆက်ရွက်ကြွေ(၄)”
ဆုမြတ်ရေ မလေးတော့ ဖတ်ရင်းနဲ့ တောင် ရင်တွေတုန်လာပြီ ။ မိသားစုနဲ့ ဖြစ်နေတဲ့ချိုသဲဘ၀ ကရှေ့ ဆက်ဘာတွေဖြစ်အုံးမလဲစောင့် နေမယ်နော်။
မလေးရယ်…. လာဖတ်ပေးတာကျေးဇူးပါနော်…ချိူသဲအကြောင်းကတော့ စောင့်ပါဦးနော်း)…. ရှေ့နှစ်ပိုင်းလောက်ဆိုရင်ဇာတ်သိမ်းတော့မှာပါ ။
ညီမရေ… ကောင်းဇင်ရဲ့အတ္တမျိုး အပြင်မှာတကယ်ကိုရှိတယ်ညီမ… ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့မိသားစုဘ၀လေးထဲ လှိုင်းကြီးလေထန်လာတာများလားညီမရယ်… ရင်တွေတုန်လိုက်တာ